Fumanisa ukuba ungayifumana njani i-OUKITEL C17 Pro yasimahla | I-Androidsis
Kwiveki ephelileyo sadibana ne-OUKITEL C17 Pro ngokusemthethweni. Imodeli entsha yohlobo lwaseTshayina, Ikhamela ikhamera yayo ngasemva kathathu. Ke iba yenye yezona zixhobo zinqwenelekayo kwikhathalogu yenkampani. Ifowuni onokuthi uhambe nayo ngoku kukhuphiswano olulungiselelwe yinkampani.
Lithuba elihle labo abasebenzisi abanomdla kule OUKITEL C17 Pro. I-brand sele yabelane ngendlela esinokuthi siyithathe ngayo le fowuni intsha, ibizwa ukuba yenye yezona zidumileyo kwikhathalogu yayo. Kufuneka senze ntoni ukuze siyifumane?
I-OUKITEL C17 Pro ifika nescreen se-6,35-intshi Ihlala kwiipesenti ezingama-90 zepaneli yangaphambili kwaye ine-HD + isisombululo. Ikwanayo iprosesa ye-Octa-core ye-2.0 GHz, ehamba ne-4 GB ye-RAM kunye nomthamo wokugcina we-64 GB. Ukongeza ekubeni nebhetri ye-3.500 mAh kule meko.
Le khamera iphindwe kathathu isilindele ngasemva kwefowuni. I-13MP + 5MP + 2MP iiSony sensors ziyasetyenziswa. Ke sinokuthatha iifoto ezilungileyo kunye nefowuni kuzo zonke iintlobo zeemeko, kuba inzwa nganye inenjongo ethile, enceda ukusebenza ngcono.
I-OUKITEL C17 Pro iya kuphehlelelwa ngemibala eyahlukeneyo, njengokuba ubona. Mnyama, luhlaza kwaye le ithoni yegradient phakathi kohlaza kunye noblowu / mfusa zizinto esinokukhetha kuzo Kwimizobo yefowuni uya kuba nakho ukukhetha umbala owuthanda kakhulu kule fowuni intsha yohlobo lwesiTshayina.
Ukuthatha inxaxheba, kuya kufuneka utsho ukuba ngowuphi umbala owuthandayo ngale OUKITEL C17 Pro, ukongeza ekuchazeni Ucinga ukuba ixabiso lale modeli liza kuba yintoni. Ukuba uyifumana ngokuchanekileyo, ungangomnye wabaphumeleleyo kule modeli intsha yophawu. Ungathatha inxaxheba kwirafi kwaye ufumane okungakumbi malunga neemeko kule khonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Fumanisa ukuba ungayifumana njani i-OUKITEL C17 Pro
I-YouTube ye-Android iya kuvumela ukusasazwa bukhoma kweevidiyo